रुद्रप्रियापछि रेखाको पुनरागमन कस्तो रहला ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV रुद्रप्रियापछि रेखाको पुनरागमन कस्तो रहला ? | Sagarmatha TV
रुद्रप्रियापछि रेखाको पुनरागमन कस्तो रहला ?
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अब्बल कलाकारको नाम लिनुपर्दा रेखा थापाको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । त्यसो त उनी नायिकाको रुपमा मात्र सिमित छैनन ।
निर्मात्री, निर्देशकसँगै राजनीतिमा समेत राम्रै प्रभाव बनाउन सफल रेखा चलचित्र क्षेत्रबाट भने टाढा हुन सकेकी छैनन् । पछिल्लो समय राजनीतिक क्षेत्रमा होमिएकी रेखा करिव एक वर्षपछि पुनः नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा मालिका लिएर पुनरागमन गर्दैछिन् । उनको पुनरागमन कस्तो रहने हो ? त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
चलचित्र हिरोबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यु गरेकी रेखालाई बाघ निर्माता छवि ओझाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा भित्र्याएका हुन् । त्यसयता उनीहरुबीच पारिवारिक सम्बन्धमा विविध उतार चढाव आएपनि चलचित्र क्षेत्रबाट भने उनले सफलता पाउँदै आइन् ।
दर्जनौं चलचित्र हिट दिएकी नायिका रेखाले चलचित्र हिम्मतवाली निर्माण गरिन् र सफलता हात पारिन् । ‘हिम्मतवाली’ पछि पुनः निर्देशनमा हात हालेकी रेखाको अभिनिय रहेको चलचित्र रुद्रप्रिया गएको वर्ष प्रदर्शनमा आएको थिाये । तर यो चलचित्रलाई दर्शकले सोचेजस्तो साथ भने दिएनन् ।
एक्सन अभिनेत्रीको छवि बनाएकी उनी सामाजिक कथावस्तुमा आधारित नारीप्रधान चलचित्र निर्माण गर्दै आएको विगतले देखाउँछ । समाजमा जरा गाडेर बसेका विकृती र विसंगतिलाई फिल्ममार्फत् उनले दर्शकमाझ पस्किँदै आएकी छिन् । रेखा अभिनिति, निर्मित तथा निर्देशित फिल्म मालिका टोली अहिले चलचित्रको प्रमोशनमा जुटेको छ ।
केही समय पहिले पहिलो गीत सार्वजनिक गरेको मालिका टोलीले अहिले दोस्रो गीत पनि सार्वजनिक गरेको छ । सुरेश अधिकारीको शब्द तथा संगीत रहेको ‘सर सर…’ बोलको गीतमा आस्था राउतले स्वर भरेकी छन् । गीतको अडियो बलियो छ । भिडियोमा फिल्मका लिड कलाकार रेखा र कमला वलीको यात्रा देखाइएको छ ।
गीतबारे रेखा भन्छिन् ‘गीतमा छोरी चेलीको आजको अवस्था बिम्बित गरिएको छ । यो गीत सबै प्रकारका असमानता, विभेद र आक्रमणविरुद्धको आवाज हुनेछ ।’ हरेक फिल्ममा नारी सशक्तिकरणको आवाज उठाउने रेखाले यसपटक ‘मालिका’बाट भने बाल विवाहको कथालाई दर्शकमाझ पस्किने भएकी छिन् । सार्वजनिक गीतले पनि मूल कथालाई प्रस्ट्याएको छ ।
रामशरण उप्रेतीको छायांकन रहेको यो फिल्म यस वर्षको लक्ष्मीपूजामा रिलिज हुँदैछ । शिवम अधिकारीको पटकथा रहेको फिल्ममा रेखा र नर कार्कीको कथा तथा कन्सेप्ट छ । नर कार्की फिल्मका कार्यकारी निर्माता समेत हुन् भने निर्मातको रुपमा रेखाकी आमा सरस्वती थापा छिन् । यसअघि सार्वजनिक भएको ‘मालिका’ को ‘हल्का माया’ बोलको गीत पनि अहिले चर्चामा छ ।